Olee Otú Ị Ga-esi Kwụsị Ịtụ Ụjọ Ọnwụ? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Ịtụ ụjọ ọnwụ abụghị ihe ọjọọ n’ihi na ọnwụ bụ onye iro anyị, anyị anaghịkwa eji ndụ anyị egwu egwu. (1 Ndị Kọrịnt 15:26) Ma, ọ bụrụ na ihe na-abụghị eziokwu ndị mmadụ kweere emee ka mmadụ na-atụ ọnwụ ụjọ na-enweghị isi, ọ ga-eme ka onye ahụ ‘nọrọ n’ohu ná ndụ ya niile.’ (Ndị Hibru 2:15) Ịmata ihe bụ́ eziokwu ga-eme ka ị ghara ịna-atụ ọnwụ ụdị ụjọ a, bụ́ ihe na-eme ka mmadụ ghara ịnụ ụtọ ndụ.—Jọn 8:32.
Ihe bụ́ eziokwu gbasara ọnwụ
Ndị nwụrụ anwụ enweghịzi ihe ha ma. (Abụ Ọma 146:4) Baịbụl ji ọnwụ tụnyere ụra. Ọ bụ ya mere i kwesịghị ịtụwa ụjọ na ị ga na-ata ahụhụ ma ọ bụ gaa n’ebe a ga na-emekpa gị ahụ́ ma ị nwụọ.—Abụ Ọma 13:3; Jọn 11:11-14.
E nweghị ihe ndị nwụrụ anwụ ga-emeli ndị dị ndụ. Ndị iro anyị na-eme ihe ike nwụọ, o nweghịzi ihe ha ga-emeli anyị. (Aịzaya 26:14) Baịbụl sịrị na “ịkpọasị ha na ekworo ha alaworị n’iyi.”—Ekliziastis 9:6.
Ma, ọ pụtaghị na onye ọ bụla nwụrụnụ agaghịzi adị ndụ ọzọ. Chineke ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ.—Jọn 5:28, 29; Ọrụ Ndịozi 24:15.
Chineke kwekwara anyị nkwa na oge na-abịa mgbe ‘ọnwụ na-agaghị adị ọzọ.’ (Mkpughe 21:4) Baịbụl kwuru banyere oge ahụ, sị: “Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi,” ha agakwaghị na-atụ ụjọ na ha ga-anwụ.—Abụ Ọma 37:29.